ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်လို့ ဖီဂျီမှာ ရွာ ၄၀ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ပြင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်လို့ ဖီဂျီမှာ ရွာ ၄၀ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ပြင်
Fijian fishermen stand in their boats as they work in front of an island's mountain range near Suva April 29, 2004. Canoes are still used by fishermen asameans of getting to deeper waters in the South Pacific Island nation that is made up of more than 300 islands scattered across 500,000 square-kilometres (200,000 square-miles) of ocean. REUTERS/David Gray DG/CP - RP4DRIGBIHAB
ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်လို့ ဖီဂျီမှာ ရွာ ၄၀ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ပြင်
တောင် ပစိဖိတ်ထဲက ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဖီဂျီမှာ ကမ်းခြေ ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်မှုတွေ ရှိလာတာကြောင့် ကျေးရွာပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ ဖီဂျီအစိုးရက စီစဉ်နေပါတယ်။
လောလောဆယ် ကုန်းမြင့်တဲ့နေရာကို ရွာ သုံးရွာ ပြောင်းပေးထားပြီး ထပ်ရွှေ့ဖို့ ၄၃ ရွာ ကျန်နေပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် တခြား ပစိဖိတ်ကျွန်းတွေကနေ ရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်လာမယ့်သူတွေကို ကူညီဖို့လည်း အစိုးရက ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဖီဂျီ ရှေ့နေချုပ်က ပြောပါတယ်။
အဲ့လ်ပ်စ် တောင်တန်းကနေ အင်းဒိစ် တောင်တန်းအထိ ရေခဲတွေ အရေပျော်မှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုမျိုး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုကို ဝိုင်းဝန်းတားဆီးရေး ဂျာမနီမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ ညီလာခံမှာ ဖီဂျီ သမ္မတက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ပငျလယျရေ မွငျ့တကျလို့ ဖီဂြီမှာ ရှာ ၄၀ ရှပွေ့ောငျးဖို့ ပွငျ
တောငျ ပစိဖိတျထဲက ကြှနျးနိုငျငံဖွဈတဲ့ ဖီဂြီမှာ ကမျးခွေ ပငျလယျရေ မွငျ့တကျမှုတှေ ရှိလာတာကွောငျ့ ကြေးရှာပေါငျး ၄၀ ကြျောကို ရှပွေ့ောငျးပေးဖို့ ဖီဂြီအစိုးရက စီစဉျနပေါတယျ။
လောလောဆယျ ကုနျးမွငျ့တဲ့နရောကို ရှာ သုံးရှာ ပွောငျးပေးထားပွီး ထပျရှဖေို့ ၄၃ ရှာ ကနျြနပေါသေးတယျ။
ဒါ့အပွငျ တခွား ပစိဖိတျကြှနျးတှကေနေ ရှပွေ့ောငျး ဝငျရောကျလာမယျ့သူတှကေို ကူညီဖို့လညျး အစိုးရက ပွငျဆငျနတေယျလို့ ဖီဂြီ ရှနေ့ခြေုပျက ပွောပါတယျ။
အဲ့လျပျဈ တောငျတနျးကနေ အငျးဒိဈ တောငျတနျးအထိ ရခေဲတှေ အရပြေျောမှုကွောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈလာတဲ့ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျ မွငျ့တကျလာမှုမြိုး ရာသီဥတု ပွောငျးလဲလာမှုကို ဝိုငျးဝနျးတားဆီးရေး ဂြာမနီမှာ နိုငျငံပေါငျး ၂၀ဝ ကြျော ပါဝငျဆှေးနှေးတဲ့ ညီလာခံမှာ ဖီဂြီ သမ်မတက ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။
Previous articleကဗျာဆရာ အောင်ပွင့်အကြောင်း Myanmar Story Book ဇာတ်ကား ပုသိမ်မှာ ပြသ (ရုပ်/သံ)
Next articleထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကို အလုပ်သမားစေလွှတ်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင် (ရုပ်/သံ)